Qaybta daryeelka carruurta dhicisyada iyo jirrada ee Huddige waxay daryeelaan carruurta dhalata ee jirran iyo carruurta dhisyada ah. Waxaanu carruurta siinaa daryeel degsdeg ah oo isdabajoog ah qoyskuna kaalin weyn ayey ku leeyihiin muhiimadana waxaanu siinaa sidii ay waalidiintu daryeelka ilmaha qayb ugu noqon la haayeen.
Waalidiintu waxay dhammaantoo fursad u leeyihiin inay la deggenaadaan ilmahooda, inay ilmahooda isku qol la joogan ama qol ku xiriirsan qolka ilmahoodu joogo. Wakhtiga daryeelka ilmaha la siinayaa wuu kala duwanaankaraa wuxuu noqon karaa dhowr saacadood ilaa dhowr bilood. Carruuraha qaarkood wakhtiyada dambe ee daryeelka caafimaadka waxay ku qaadan karaa gurigooda la kaashanaya daryeelka caafimaadka guryaha (hemsjukvård) kuwaas oo kuwada xiran qaybaha isbtitaalka dhammaantood.
Qaybta daryeelka carruurta dhiciska iyo jirooyinka ku dhasha ee Huddinge
Ibitaalka jaamacadda Karolinska ee Huddinge
Si aad u hesho qaynta waxaad toos uga baxaysaa albaabka weyn ee laga soo galo. Qaado dhinaca bidix ee Kirurgigatan. Raac barxadaa (korridoren), dhaaf qolka wiishka kadibna sii soco ilaa iyo qolka kale ee wiishka (K4). Wiishka ayaad kor u raacaysaa ilaa dabaqa 7aad. Marka aad wiishka ka degto albaabku dhinaca bidix oo waxyar qalooc ah ayuu kaa qabanayaa. Qaybta carruurta dhicisyada iyo jirooyinku way xiran tahay, markaa taabo gambaleelka annaga ayaa kaa furayna oo ku saxayna. Soo dhowaada!
Baabuurta waxa la dhigan karaa meelaha booqashada loogu talaglay. Qiimauhu waa Saacadii waa 8 kr/timme.
Qaybta waxa lagu xannaaneeyaa carruurta dhicisyada ah iyo carruurta wakhtigoodii caadiga ahaa ku dhasha ee u baahan in si dheeraad ah looga warhayo, daryeela caafimaad ama daaweyn aanay qaybta lagu dhalaa aanay bixinkarin. Carruurta halkan lagu daryeelo waxay inta badan u nugul yihiin qaylada dheer, iftiinka badan iyo infekshanada.
Ilmaha halkan lagu daryeelo waxa lagu xannaaneeyaa meesha intensiifka (intensivvårdsplats) halkaas oo dadka waalidka ah la siinayo qol iyagu leeyihiin qolkaa oo ay isku xiriirsan yihiin meesha ilmaha lagu daryeelayo, ama waxa la siiyaa qol gaar ah oo ay qoyska oo dhami deggenaan karaan oo ay habeenkii wada seexan karaan.
Isbitaalka carruurta ee Astrid Lidgren wuxuu deeggaanka Stockholm ku leeyahay saddex qaybood oo ah carruurta ku dhalata dhicinimada iyo jirooyinka waana caadi inuu qoysku beddelo qolka iyo xitaa marmar qaybta ilmaha lagu daryeelaya inta lagu guda jiro muddada daryeelka
Soo gelitaan/kaar lagu soo geleyo (entre/passerkort)
Albaabka weyn ee isbitaalka laga soo galo wuu xiran yahay inta u dhaxaysa 22- 05, soo wac telefoonka derbiga ku yaala si aad u soo gasho. Qaybtu afar iyo labaatankii saacadoodba way xiran tahay. Mas'uulka ilmahu wuxuu saxiixayaa warqad kadib waxa la siinayaa kaar waxaana ku siinaya shaqaalaha daryeelka wuxuu qofku bixinayaa lacag deebaaji ah.
Albaabka laga soo galo qaybta waxa ku yaala armaajo fure leh oo dharka bannaanka lagu xiran karo. Isticmaal bacda kabaha la geliyo haddii uu dhulku qoyan yahay kadibna waanu jeclaan lahayn inuu qofku kabaha gudaha lagu joogo gashado.
Kharashka bukaan socodka (patientavgifter)
Carruurta ku dhalata dhicisnimada iyo jirooyinka lacag la'aan ayaa lagu daryeel yeelayaa.
Qoysku waxay lacag la'aan ku helikaraan inay isticmaalaan jikadda waalidiinta ee qaybta. Subax kasta quraacda waxaanu bixinaa saacadaha u dhexeeya 07:00 iyo 09:00 waxaana marwalba jira bun, shaah iyo shukulaato. Halkan waxa jira fursad ah inuu qofku kululaysankaro cuntada uu soo qaatay iyo inuu helikaro qaboojiye, firinjeer (talaagad) iyo meel uu alaabada qalalan dhigan karo. Dadka isticmaala jikada dhammaantoo iyaga ayaa ka mas'uul ah dhiqida weelka iyo tirtirida miisaska iyo kuraasida. Sababo nadaafada awgeed marka wax la qalajinayo waxa la isticmaalayaa waraaqo keliya. Meelaha dusha sare ee la isticmaalay waxa la marinayaa oo lagu tirtirayaa ytdesinfektion.
Dabaqa 5aad & 6aad ee albaabka weyn ee laga soo galo waxa ku yaala makhaayad, kafateeriya iyo dukaan yar. Suuqa Flemingsberg waxa ku yaala makhaayado badan iyo dukaamo cunto.
Qaybta dhexdeeda majiro boos weyn oo loogu talagalay inay carruurta walaaluhu ku ciyaaraan. Dhammaan walaalaha waa lagu soo dhaweynayaa inay soo booqdaan meesha lagu ciyaaro iyo meel dibbeda ah oo lagu ciyaaro oo ku taala meel isbitaalka u dhow. Waxaa looga baxayaa Barngatan B4, plan 4.
Fursaddaha dhar dhiqida waalidiinta
Qofku dharkiisa wuxuu ku dhaqan karaa qaybta (avdelningen). Wakhtiga uu qofku xiranayo qolka dharka lagu dhaqdo wuxuu ka helayaa meel u dhow jikada waalidiinta. Saabuunta dharka lagu dhaqdo oo aan caddar lahayn iyo saabuunta jilcisaduba waxay yaalaan qolka dharka lagu dhaqo. Dadka isticmaala qolka dharka lagu dhaqo ayaa mas'uul ka ah nadaafada qolka. Meela qasaaladdaha korkooda oo dhan waxaa lagu tirtirayaa daawada jeermiska disha (ytdesinfektion) marka la isticmaalo kadib.
Waxa fiican marka telefoonka gacanta lagu hadlayo in lala tago meel ka baxsan meesha ilmaha lagu daryeelayo. Waxaanu rabnaa marka ilmaha lala joogo/loo dhow yahay in aanu telefoonku lahayn cod si aanu ilmaha u dhibin, ka dhig sida marka diyaarada la saaran yahay oo kale. Qolka qoyska loogu talagalay telefoonka waa lagu isticmaali karaa. Telefoonka gacanta waxa loo oggol yahay inuu qofku ilmihiisa ku sawirto. Sida kale guud ahaan sawirku isbitaalka waa ka mamnuuc. Waxa jira wi-fi ay dadka martida ahi isticmaali karaan.
Qaybta waxa ka shaqeeya qof idin kala talinay arrimaha bulshada (kurator), way fiican tahay in aad la hadashaan qofkale oo ka baxsan dadka ilmahiina daryeelaya tooska ah siinaya. Sidoo kale wuxuu la taliyaha arrimaha bulshadu idinka caawinkaraa warbixino ku saabsan lacagta waalidka la siiyo, markuu qofku xannuun ku maqan yahay iyo su'aalo la taaban karo oo wax ku ool ah. Mararka qaarkood way fiican tahay inay walaalaha waaweyn iyo dadka qaraabada ahi la hadlaan la taliyaha arrimaha bulshada (kurator).
Waxa kale oo jirta fursad ah inuu qofku la kulmikaro qof cilmi nafsiga bartay/saakoolajiiste (psykolog) si uu qofku taageeo dheeraad ah u helo
Waxaad sidoo kale la hadlikartaa shaqaalaha kiniisada isbitaalka. Waxay marwalba diyaar u yihiin wadahadal. Waxaad kala xiriiraysaan shaqaalaha qaybta ama telefoonkan 08-585 800 00 ayaa idiin gudbinaya. Haddii aad rabtaan in ilmihiina loo magac bixiyo inta uu daryeelka caafimaad ku jiro waxa idinka caawinaya kiniisada isbitaalka.
Dabaqa 5aad ee Hoolka dhinaca koonfur C259 waxa ku yaala hal qol oo loogu talagalay xasillonida (tukashada) oo booqashooyinka u furan afar iyo labaatankii saacadoodba.